समाजसेवी इशा दिदि भन्छिन :बामपन्थी सरकार खोइ? ‘बलात्कारीको तुन्तुरो काटिदिनु पर्यो’ « Postpati – News For All
समाजसेवी इशा दिदि भन्छिन :बामपन्थी सरकार खोइ? ‘बलात्कारीको तुन्तुरो काटिदिनु पर्यो’
पछिल्लो समय नेपालमा वामपन्थी सरकार आएको छ तर बलात्कारका जघन्य घटनाहरु अझ धेरै बढ्न थालेका छन् । नाबालकामाथि हुने दिनप्रतिदिनका बलात्कारका घटनाहरुले आम नागरिकहरुमा चिन्ता उब्जिएको छ । तर बलात्कारीका जघन्य अपराध रोकथामका लागि बामपन्थी सरकारको कुनै नयाँ योजना छैन अर्थात बलात्कारको घटना प्रति बामपन्थी सरकार मौन छ ।
नेपालमा हुने बलात्कारका समाचारले बिशेष गरि देशका चेलीहरुको मन छियाछिया भएको छ, मनमा सन्त्रास जागेको छ । भर्खरै सुर्खेतमा प्रहरीको संलग्नतामा एक विद्यार्थी गौरीकला रोकायाको हत्याले देशको सुरक्षा संयन्त्रमा नै प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । जुन निकायले सुरक्षा अनुभूति दिनु पर्ने हो त्यहि निकाय बलात्कारमा संलग्न देखिन्छ । जनमानसलाई यसले अझै थप चिन्तित बनाएको छ ।
बालात्कारको घटनाले सामाजिक संजाल दिनहुँ पोतिएको देखा बेलायतमा रहेकी समाजसेवी ईशा गुरुङले आफ्नो फेसबुकमा चिन्ता प्रकट गरेकी छिन् ।
अबोधबालिकाहरुलाई बलात्कार गर्नेहरुको तुन्तुरो काट्नु पर्नेमा जोडदिदैं सरकारलाई घच्घच्याएकि छिन । ईशा गुरुङ आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत यस्तो संदेश दिएकी छन, ‘तिन महिना भयो दिनहुँ बलत्कार, त्यहि माथि अबोध नानिहरुलाई, जो ५ बर्ष देखि १२ बर्ष सम्मका छोरीहरुलाई बलात्कार गर्ने पशुहरुको तुन्तुरो छिनाल्नु पर्यो, होइन भने फाँसी हुनुपर्यो ।’
दिनहुँ फेसबुकमा सुनिने बलात्कारका घटनाले मन नै छियाछिया बनाएको बताउदै हाम्रो देशमा सरकार छकी छैन ? भन्दै कतै सरकार हराई रहेको भाव पोखेकी छन । ‘हाम्रो सरकार खोई’ भन्दै न्यायका लागि राज्यले बलात्कारीलाई कडा सजाय दिनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
गरिवहरु आपत-विपतमा पर्दा संधै सहयोगमा जुट्ने गुरुङसेनीले बलात्कार यस्ता घटनाले धेरै मन रुवाएको बताउदै, भावुक हुँदै बलात्कारीलाई भनेकी छन्, बलात्कार गर्नु नै छ भने टुडिखेल लगाएका महोत्सव समारोहमा नांगै हुने महिलाहरुलाई बलात्कार गरे भयो नि त ? किन अबोध बालिकालाई गर्छौ, जो उनीहरु छोरी बहिनि सरह हुन्’ ।
मुखले नभने पनि अंग प्रदर्शन गरेर ‘मलाई बलात्कार गर’ भनेर इशारा दिने देशका छाडा महिलाहरुलाई बलात्कार गर्न सुजाव दिंदै अबोध बालिकाहरुलाई बलात्कार नगर्न अनुरोध गरेकी छिन ।
दिनप्रतिदिन यसरि बलात्कारका घटनाहरु बढी रहनु र राज्यका सम्बन्धित निकायहरु मौन हुनुले आम नागरिकमा राज्यप्रति तिब्र असन्तुष्टि बन्दै छन् । ठुलो आशा गरेको बामपन्थी सरकार पछिल्लो समय बलात्कारको घटनाले चुनौती दिइरहेका छन ।
इशा गुरुङको भिडियो हेर्नुहोस;
१७ चैत्र २०७४, शनिबार को दिन प्रकाशित